Nin Cadaan ah oo weerar argagaxiso ah ku qaaday masaajid ku yaala dalka New Zealand oo uu ku dilay 49 qof isagoo kamarad toos ama live ah duubayey markuu dadkan laynayey | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Nin Cadaan ah oo weerar argagaxiso ah ku qaaday masaajid ku yaala dalka New Zealand oo uu ku dilay 49 qof isagoo kamarad toos ama live ah duubayey markuu dadkan laynayey
Published on March 15, 2019 by sdwo · No Comments
Nin lagu qiyaasay ilaa 28 jir oo kamaradna koofiyada si toos (live) ah internetka ugu xidhay ayaa ka soo degay baabuurkiisa isagoo khaanada danbe ee baabuurka furay oo guri dheer oo casriya kala soo degay. Ka dibna wuxuu u dhaqaaqay dhinacii masaajidka oo uu ka galay albaabkii weynaa ee baabuurtu ka gelaysay isagoo lugaynaya. markiibana wuxuu ku bilaabay rasaasta dadkii albaabka gudaha masaajidka sii gelayey. isagoo markiiba gudahii masaajidka galay oo aad arkaysid isagoo saqduudkii dhawr qof ku dilaya, ka dibna masaasjidkii qaybahii lagu tukanayey mid mid u gelaya oo dadkii wixi ku jiray oo islahaa baxsada uu mid kaste halkiisii uu ku toogtay. Isagoo mudo ku dhex wareegay masaajidka oo meydadkii dadkii uu daalyey mid mid hadana madax uga tooganaya ayaad ka arkaysa fiidyahii uu iska duubayey sida tooska ah. Ka dib wuxu ayaar ku noqday baabuurkiisii oo u jiray ilaa 100 talaabo oo weli khaanadii danbe furantahay ka dibna qorigii hore ayuu dhulka ku tuuray, waxaanu gaadhigii kala soo baxay qori cusub oo kii hore u eg. isagoo bilaabay in uu baabuurtii hortaalay masaajidka uu qaarkood uu rasaas ku furo, ka dibna wuxuu ku laabtay gudahii masaajidka isagoo hadana dadkii uu laayey dul tegay oo mid mid hadana madaxa uga sii wada toogtay si aanay ugu dhex dhuumanin cid dhaawac ahi.
Ka dib dibaduu u soo baxay isagoo gabadh dariiqad ku toogtay oo iyadoo dhawac ah oo qaylinaysa intuu dul tegay madaxa ka toogtay. dhawr xabadood oo kalana uu heeraraha u ridayey iyadoon la arkaynin ciduu ku ridayo, waxanad arkaysaa isagoo weli kamaradiisii live tahay inuu baabuurkii fuulay oo uu aayar iska dhaqaaqay.
Dadka ilaa hada dhimashadooda la xaqiijiyey ayaa ah 49. dhaawacana waxa lagu sheegay 48 badandkooda xaaladoodu culustahay.
Aduunka oo dhan ayaa laga canbaareeyay weerarka argagaxisda ah. Maayerka magaalada London baa ku dhawaaqay in manta salad jimcaha dhamaan masaajidada oo dhan ay ilaalindoonaa ciidamo hubaysani